हास्य स्ट्रिपहरू जुन केवल ग्राफिक डिजाइनरले बुझ्दछन् | क्रिएटिव अनलाइन
एक ग्राफिक डिजाइनर को जीवन मा सजिलो छैन। यद्यपि ती सबै समस्याहरू दिनदिनै उत्पन्न हुनेहरू पनि हुन् हास्यास्पद किस्सेहरू हुन सक्छ त्यो, जब सम्झना गरिन्छ, हामीलाई मुस्कान भन्दा बढी बनाउनुहोस्। यो स्पष्ट छ कि प्रत्येक चीज प्रिज्ममा निर्भर गर्दछ जुन बाट यी अनुभवहरू अवलोकन गरिन्छ। क्रिएटिभ मार्केटबाट तिनीहरूले ग्राफिक डिजाइनरको पेशाको वरिपरि घुम्ने धेरै राम्रो चित्रणको श्रृंखला विकास गरेका छन्।
हेलवेटिका फन्टको साथ पागल जुनूनहरू, ग्राहकहरू सताएर, ग्राफिक डिजाइनरको जिज्ञासु सहरी प्रजाति ... र धेरै लामो एस्टेरा। नयाँ वर्षको सुरूमा काममा फर्कनु अघि हाँस्न र थोरै प्रोत्साहनका लागि ठूलो। उनीहरुको आनन्द लिनुहोस्!
हनी ... तपाईं भयानक देखिनुहुन्छ।
मैले यस गर्मीमा la० तहहरू जित्थे।
हुनसक्छ तपाईले हेल्वेटिका भन्दा राम्रो फन्टहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ।
(,,6.532२ स्रोतहरू पछि ...)
Helvetica सबै भन्दा राम्रो हो!
यो ग्राहक लोगो नयाँ र color बनाउन चाहन्छ। एउटा जुन अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन।
यसैले हामीलाई काममा पिउन अनुमति दिइनु पर्दछ।
प्यानटोन १ 18-१1438 मा यो पाउनुभयो?
एक डिजाइनरको दिमाग: हेल्भेटिका भन्दा अन्य स्रोतहरू।
म डराउँछु कि हामी कसैलाई उनीहरूको स्क्रिन छुनका लागि हटाउन सक्दैनौं।
हे, तपाईंसँग मैले पठाएको लोगोको अन्तिम तेस्रो संस्करण छ?
हो! हामीलाई मन पर्छ। हामीले भर्खर केहि रिचचिंग गर्यौं।
ब्रेट अपमान लेख्दैछ ...
ग्राहक मलाई हात्ती बन्न चाहन्छ… भोलिको लागि।
के लोगो अलि ठूलो बनाउन सकिन्छ?
मलाई थाहा छैन भाई ... ऊसँग त्यो कारक अभाव छ।
के तपाईं अझै पनि हरेक दिन लुगा लगाउँनुहुन्छ तपाई घरमा काम गर्दा पनि?
हो, सबै कुराको बावजुद म धेरै पेशेवर हुँ।
के यो कमि ?्ग फन्ट हो ?! र कर्निंग फिक्स गर्नुहोस्!
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » कलाकारहरू » हास्य स्ट्रिपहरू जुन केवल ग्राफिक डिजाइनरले बुझ्दछन्
फर्नांडो जोस भेलास्को मिल्लोनो भन्यो
दुई vignettes मा मेरो जीवन।
फर्नान्डो होसे भेलास्को मिल्लोनोलाई जवाफ दिनुहोस्
हाहाहा मैले तिनीहरू मध्ये केही बुझे किनकि म धेरै डिजाइनरहरूसँग काम गर्छु
तिनीहरूको धैर्यताको लागि म उनीहरूलाई बधाई दिन्छु! वर्काना स्टुडियोमा म उनीहरूमध्ये धेरैको साथ काम गर्दछु र मलाई थाहा छ कि उदाहरणको लागि बिरालोको साथ एउटा वास्तविक छ! हाह